Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka dracaena iyo hababka looga hortagayo
Drumeni Homeland waa dhul-gariirka iyo kaymaha kulaylaha ee Afrika, Koonfurta Aasiya iyo Aasiya. Duurjoogta, dhirtu waxay gaadhi kartaa ilaa 20 mitir, laakiin gurigana sidoo kale waa la koray. Nasiib daro, inkasta oo ayadoon la qabsan karin daryeelka, cudurada iyo cayayaanka ayaa wali saameynaya marxaladda masduulka, tani waxay keeni kartaa dhimashada geedka.
Sida loo abuuro oo u koro daffodil dheri
Dad badan ayaa u maleynaya in daffodils ay yihiin dhirta beerta keliya. Si kastaba ha ahaatee, ubaxyada waxaa lagu beeray karaa oo lagu koray guriga dushiisa. Waxay yihiin kuwo aan qabyo ahayn, si sahlan loo nadiifiyo. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa noocyada ugu waaweyn ee narkhada ee beerto iyo daryeelka guriga, shuruucda xulashada nalalka, gaar ahaan beerto iyo kormeerida dhirta gudaha.
Sheflera ayaa ka mid ah dhirta ugu caansan ee qoyska Ariaceae. Caleemaha yaryar ee caleemaha ah ayaa lagu soo ururiyaa saldhigga dhuuban khafiif ah, taas oo siinaysa muuqaal dallad ah. Warshadan quruxda badani ma ahan mid aad u furfuran daryeelka, laakiin cheflera ubaxa waxay u baahan tahay habab karti leh dhalashada.
Heather: daryeelka iyo dhalida guriga
Heather waxaa ka mid ah qoyska heather, oo leh wax ka badan 500 nooc. Afrika waa hoyga ugu badan. Heather waa geed caleemo leh oo ay ku jiraan ubaxyo yaryar, oo u eg sida dawanno kala duwan oo ah lilac, lilac, cad, casaan iyo guduud.
Saxafranku waa warshad dilaac ah oo jecel in ay ku noolaato dhulalka buuraha leh. Ubax shan dabaq ah, cadaan, casaan iyo jaalle ah, sida caadiga ah ayaa lagu ururiyaa dalladaha inflorescences. Si ballaaran loo yaqaan for heesaha bogsashada, geedka waxaa inta badan loo isticmaalaa in qaabeynta muuqaalka. Waxyaabaha kiimikada ee saxafrajka Qayb ka mid ah saxafrajka waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo raad raac ah, pigments, fitamiino, iyo sidoo kale walxaha dabiiciga ah: saponin, coumarin, alkaloids, flavonoids, dufan iyo asiidhyada organic, xayawaanka glycosidic iyo triterpene, qaybaha ether.
Dieffenbachia (Dieffenbachia) - warshad kuleyl ah oo kuleyl ah ilaa laba mitir oo sare, oo leh caleemo badan oo kala duwan oo u dhexeeysa ilaa nus mitir, kuwaas oo dhalashadoodu tahay Koonfurta Ameerika. Iyada oo daryeel ku haboon, dhirta si fiican u koraa, sii daaya caleemo cusub oo ku qanco isha iyadoo la eegayo muuqaalkiisa aan la yaab lahayn. Laakiin, sida dhirta qotoda dheer, dieffenbachia waxay u nugul yihiin cuduro kala duwan.
Daryeelka haboon ee xajinta gurigaaga: talooyinka guud
Geedaha Palm waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh oo aan ahayn oo kaliya taraafikada, laakiin sidoo kale guriga, halkaas oo ay keenaan badan oo cusub. Laakiin daryeesha geedo timir ah guriga ma ahan hawl fudud, sidaas ayaannu u falanqeyneynaa habkan. Qoyska dhirta timirta ah Goobta ugu caansan ee aad ku arki kartid geed caleenta ah waa goob kulaaleed ama goobjoog ah.
Kobcinta dhirta adigoo raacaya waa habka ugu caansan ee koritaanka daaqsintooda iyo burcadbadeedda arrintani waa mid fog. Horumarka masraxa ee laga goynayo goynta ma aha mid adag, gaar ahaan marka la eego shucuurta soo socota. Laurel soo saarka at home: gooyn goynta For reproduction dhirta iyadoo la isticmaalayo habkan, gooyn yar oo qoryo ah in laga heli karo warshad kale waa ku fiican.
Vanda Orchid: sida loo nadiifiyo biyaha, bacriminta, dib u noqoshada
Markaad aragto ubax sida Vanda orchid, waxaad isla markiiba ku dhici doontaa jacaylka. Waxay u weeciso oo indhaha ku haysaa quruxdeeda aan caadiga ahayn. Haddii aad rabto inaad degto ubaxkan aan caadiga ahayn ee gurigaaga, waxaad u baahan tahay inaad barato dhammaan faahfaahinta daryeelka isaga. Ma taqaanaa? Orchid Wanda Miss Joachim tan iyo 1981 waa ubaxa qaranka ee Singapore.
Sida loo abuuro kareemka liin ee dheriga, korriin "sabiibta liinta" ee xaaladaha qolka
Dad badan oo naga mid ah ayaa ogaanaya arinkan quruxda badan leh iyo fayradda liin macmacaanka liinta. Dadka Melissa waxaa sidoo kale loo yaqaan 'nude ". Iyada oo ay sabab u tahay sifooyinka wanaagsan iyo gingerbread, cawska waxaa loo isticmaalaa karinta iyo daawada. Haddii aadan haysan dacha, laakiin waxaa jira rabitaan ah inaad ku raaxaysato dhamaan kalayada dhirta, waxaad isku dayi kartaa inaad kobciso miro liin at guriga.
Sidee loo kobciyaa shinni (thyme) ee daaqadaha, beeraha iyo daryeelka guriga
Thyme or thyme waa geedo daaqsin ah ilaa 15 cm sare, caleemaha si ficil ahaan ah u faafaya dhulka, iyo afkoda leh ubax la koray kor ku xusan ciidda. Nidaamka xididku waa mid muhiim ah. Ka baxaa ilaa 10 mm dheer, oval, dhammaadkii loo yaqaan. Qeybta hoose ee caleen waa midabka dhalaalaya, mid yar, midabkiisu yar yahay, dhinaca sare ee caleen waa siman yahay, caleen waxay ku xiran tahay asliga ah leh stem gaaban.
Talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan abaaraha sii kordhaya ee guriga
Nighthade waa dhir asal ah oo qurxoon. Inta lagu jiro fruiting, baadiyaha waxaa lagu daboolay kubad qurux yar oo miro ah, iyo sabab u ah Bisaylkiisa aan sinnayn ee midhaha, waxay midabada midabyo kala duwan: laga bilaabo cirro huruud ah ilaa cas madow. Waxaan abuurnaa shuruudo fiican oo loogu talagalay maalmaha soo koraya ee guriga dhexdiisa. Xaaladaha ku habboon ee qolka qolka ah waa nalka wanaagsan, qoyaanka hawada, carrada iyo kuleylka.
Astaamaha korriinka (kupyr) ee guriga
Waa suuragal in la koro kareemka daaqada? Waa maxay feeraha (kupyr, zhurnitsa, dhirta Faransiis), dad badan oo jecel digaaga way yaqaanaan, waa geedo sanadle ah 20-70 cm oo dherer ah oo ka soo jeeda qoys dallad, oo u eg dhir beerta caadiga ah. Chervil waxaa loo isticmaalaa sida xawaashka, caleemaha udugga urta isla markiiba dhir, tarragon iyo dabka, waxay dhadhamiyaan wax yar qadhaadh.
Goobidda iyo dayactirka lauleelka guriga
Laurel waa caleemaha ugu caansan ee caleemo qoyan ama geed ku yimid oo ka yimid Mediterranean. Giriiggii qadiimiga ahaa, warshadkan quruxda badan waxaa lagu magacaabay Daphne, oo lagu magacaabo Daphne. Apollo, oo jilicsan oo jacayl u ah iyada, waxay soo jiidatay ubax laga bilaabo laurel, taas oo noqotay qalabkiisa muhiimka ah, oo horayba uga timid arrintani waxay ka timid sharraxaad laacib ah oo astaan ​​u ah guusha iyo guusha.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato brugmancia sii kordhaya miraha
Brugmansia waa geed dhafan oo qiyaas ah ilaa 5 mitir sare. Warshadkan quruxda badani waa mid ka mid ah qoyska of nightshade, waxay u muuqataa mid xoog leh oo qalaad. Caleemaha ayaa qaabeeya qaabka loo yaqaan "ellipse" illaa 50 cm oo dheer. Kobaca caleenta waa mid aan caadi aheyn - xariiq caleemo qotodheer leh caarad jilicsan oo leh xariiq caleemo gaaban oo leh qulqul aan caadi ahayn.
Sida loo macaamilo cactus cayayaanka
Cacti waa succulents. Kuwani waa dhirro ku noolaan kara muddo dheer xaaladaha abaarta. Waxay soo nuugaan biyaha inta lagu jiro roobabku, waxay ku ururaan unugyada, sidaas awgeedna waxay ku noolaan karaan waqti qallalan. Ma taqaanaa? Markii hore, cirbadaha caktus ayaa loo isticmaalay daawada. Waxay dillaaceen boogo. Ku dhejiyey dhuxul kulul.
Sida loo koro poinsettia guriga
Poinsettia: Description of Poinsettia Shrub, oo sidoo kale loo yaqaano xiddiga Christmas-ka, qurux badan, euphoriya quruxda ugu quruxda badan waa dhuxul qoyan oo leh caleemo qurux badan oo casaan, jaalle ah, casaan ama caddaan ah oo sii kordhaya caan u ah sida warshad gudaha ah oo ay sabab u tahay ubaxyada xilliga qaboobaha bilooyin, qurxinta meelaha nololeed ee sannadka cusub ee kirismaska ​​iyo kirismaska.
Noocyada ugu badan ee la raadsado ee jimicsiga qolka
Dabeecadda, waxaa jira in ka badan laba boqol oo nooc oo geraniums ah. Thanks to xulashada, noocyo badan ayaa la soo saaray in ka dhergin kartaa dhadhanka wax kasta oo xitaa dhirta ugu baahida badan. Geraniums maanta waxaa lagu qurxiyaa guryaha, balakoonnada, gaaska iyo meelaha bannaan, beeraha. Noocyo farabadan ayaa ah kuwo aan ahayn midabyo, laakiin sidoo kale caleenta. Aagga Pelargonium Aagga Pelargonium - noocyada ugu badan ee Geranium.
Bergamot: Daryeelka guriga ee gaarka ah
Bergamot shaaha subaxdii waa qurux badan oo ka soo jeeda koob loogu talagalay guriga oo idil! Qof kastaa wuu ogyahay magacan inuu yahay mid aad u fiican oo ku jira shaaha madow. Laakiin waxa yaab leh bergamot iyo nooca warshadda waa? Geedku waa dhexjir, natiijada lemon gudbinta, liimika iyo mandarin. Waddanka ugu dheer ee bergamot waa Koonfur Asiya.
Tradescantia: daryeelka, beerashada, dhalashada guriga
Qolka Tradescantia - mid ka mid ah dhirta ugu caansan. Wuxuu jecel yahay aqlabiyad badan oo guriga ka mid ah oo aan qabyo ahayn oo aan fududeyn. Deegaanka dabiiciga ah, xirfad-yaqaannada waxay u egtahay cawska dilka ah ee leh cufanimada afkoda. Ma taqaanaa? Tradescantia ayaa loo magacaabay qarnigii 17aad ee sharafta qoyska ee beerta Fududeeyaha.